August 2017 - BuzzFeed Myanmar
“စုဖုရားလတ်သည် သီပေါ မင်းကို မင်းသားဘဝ ထဲက တွေ့ဖူး သဖြင့် အရိုအသေ မရှိချေ ။
အမျိုးကောင်းသမီးတွေသာဆိုဒီလိုပဲ လုပ်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ် ..
ကျွန်တော့်ကို အသိမိတ်ဆွေတွေပရိသတ်တွေ က လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြသာနာအပေါ်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်သင့်ပြီလို့ အစောပိုင်းထဲက အကြံဉာဏ်ပေးကြပါတယ်…
ယောက်ျားဖြစ်သူကို အားနာလာပြီ”လို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ သင်ဇာနွယ်ဝင်း
သရုပ်ဆောင်လောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီး နာမည်တစ်လုံးရခဲ့တဲ့ မင်းသမီးသင်ဇာနွယ်ဝင်းက အချို့လူတွေ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားက မေတ္တာမပြတ်တဲ့ သူမယောက်ျားကို အားနာလာပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
ယောက်ျားထုကြီးကို မကြီးစိုး ၀ုန်းလိုက်ဘီ …!
ယောက်ျားတွေက ပြောတယ် …
မင်းတို့မိန်းမတွေက ငွေမက်တယ်တဲ့ .. ဟုတ်တယ်လေ …။
အဲဒီ ငွေမရှိဘဲ ကျောတစ်ခင်းစာ နေရာ ရနိုင်ပါသလား ?
အဲဒီ ငွေမရှိဘဲ လူကြားထဲ ၀င်ဆန့်လို့ ရသလား ?
သမီးဖြစ်သူ အပြာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်နေတာကို ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ဖခင်
အဖေဖြစ်သူတိုင်းကတော့ သမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် အမြဲဂုဏ်ယူနေကြတာပါ။ သမီးဖြစ်သူအပေါ် မှည့်တစ်ပေါက်တောင် အစွန်းအထင်းမခံချင်တဲ့ ဖခင်တွေက သမီးမိန်းကလေးတွေကို အမြဲကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့အထဲမှာတော့ စစ်သူကြီးရှုံးလောက် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဖခင်တစ်ဦးကတော့ သူ့သမီးဖြစ်သူအတွက် ဂုဏ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းက ထူးဆန်းပါတယ်
ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည့် ကြောက်မက်ဖွယ် တွင်းနက်ကြီးထဲ ဆိုင်ကယ်တစီး ထိုးကျ (ရုပ်သံ)
တရုတ်နိုင်ငံ လမ်းမတခုပေါ်မှာ ရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် တွင်းနက်ကြီးထဲကို ဆိုင်ကယ်သမားတဦး ပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်
ဘုန်းကြီး အား သတ်ဖြတ်ငွေလုယူသူများအား မသေမခြင်း ကြိုးကွင်း စွပ်သတ်အမိန့်ချ
နေ့က ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို သေဒဏ်ပေးလိုက်သည် ဟုသတင်းရရှိ။ 14.6.2016က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆရာတော် အသ တ်ခံရမှု ဘဒ္ဒန္တ ဥာဏဝံသ သက်တော် ( ၆၁ ) ဝါတော် ( ၄၁ ) စဉ့်ကူးမြို့နယ် လက်ပန်လှရွာ ဘုန်းကြီးသတ်ခံရမှု …..။
ကြက်ဥစားရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်မဲ့ အချက် ၈ ချက်
ဆံပင်နဲ့ အသားအရေကို ကောင်းစေပါတယ်။
ဗီတာမင် B2 ကြောင့် အစာများကို ခန္ဓာကိုယ်လှောင်စာအဖြစ်ပြောင်းလဲရာမှာ အကူအညီဖြစ်ပြီး အားအင်ကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
အရေပြားရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဝက်ခြံက မျက်နှာမှာသာမက လည်ပင်း၊ ချိုင်း၊ ကျောကုန်း၊ ပေါင်ခြံ စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ဝက်ခြံထွက်တတ်ပါတယ်။ ကျောကုန်းလိုနေရာမျိုးက လူမမြင်နိုင်ဘူးဆိုပြီး မကုသဘဲနဲ့တော့ မနေလိုက်ပါနဲ့နော်။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် မကုသပဲထားရင် ယားယံလာပြီးပိုမိုပွားများလာတတ်တာကိုလည်း သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ ယားယံလို့ကုတ်မိတဲ့အတွက် ခြစ်ရာပွန်းပဲ့ရာတွေဖြစ်ပြီး ပိုးဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျောပြင်တစ်လျှောက်က ဝက်ခြံများကို ကုသနိုင်ဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလ